यस्तो रहेछ गुगलमा सबैभन्दा बढीले खोजि गरेको सेक्स सम्बन्धी उत्तर
Friday, 27 Oct, 2017 12:24 PM
अहिले सबै समस्याको समाधानका लागि गुगलमा निर्भर रहने गरेको छ । चाहे त्यो सानो समस्या होस कि ठुलोे । अधिकांश मानिसको सवालको जवाफ गुगलमा हुने गर्दछ । जब कुरा सेक्सको आउँछ तब अनलाइन जगतमा हरेक प्रकारको जानकारी पाइन्छ । ड्युरेक्सको तर्फबाट गराइएको अध्ययनमा यो कुराको खुलासा भएको छ कि सेक्ससँग सम्बन्धित एउटा प्रश्नको उत्तर धेरैले खोजी गरेको पाइएको छ।
यो अध्ययनका अनुसार गुगलमा सबैभन्दा बढी सोधिने प्रश्न हो–जी स्पँट कहाँ हुन्छ ? र,जस्तो कि आशा गरिएको थियो कि यसको उत्तर गुगलमा पनि छ । जब गुगलमा प्रश्न गरियो तब उत्तर त आउने नै भो । गुगलका अनुसार जी स्पट योनीको २–३ इन्च भित्र हुन्छ, र यस्तो मानिन्छ कि यो पार्टलाई उत्तेजित गर्दा अत्यधिक तिब्र अर्गज्म प्राप्त हुन सक्दछ ।
यद्यपि यसको सही उत्तर गुगलसँग पनि छैन । केही महिलाहरुमा जी स्पटलाई उत्तेजित गर्दा आनन्द प्राप्त हुन्छ । किंग्स कलेजका अनुसन्धानकर्ताहरुले एउटा अध्ययन गरेका थिए, जसअनुसार महिलाहरुमा यो जी–स्पटका बारेमा कुनै प्रमाण फेला परेन ।
उता पेरिसमा गायनैकालजिस्ट्सको बैठकका क्रममा फ्रेन्च वैज्ञानिकहरुले किंग्स कलेजको यो अध्ययनलाई गलत बताइयो । यो बैठकको आयोजक लिभेन मिमोनले भने कि ६० प्रतिशत महिलामा जी–स्पट हुन्छ र त्यसको खोजी गर्नु भने आवश्यक छ ।
जी–स्पटबाहेक केही अरु सवाल पनि थिए, जसलाई गुगलमा सबैभन्दा बढी खोजिएको थियो । ती सवाल यस्ता थिए–कुनै महिलालाई अर्गज्म कसरी महशुस गराउन सकिन्छ ? हर्प्स अर्थात दादबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ ?, गुप्ताङ्गको रौं कसरी हटाउने ? लिङ्गको साइज कसरी बढाउन सकिन्छ आदि । एजेन्सी